Nahazo fandresena voalohany ny Barea omaly alakamisy 27 jona 2019 fa naharesy ny Hirondelles avy any Burundi, tao amin’ny kianjan’i Alexandrie any Egypte, teo amin’ny andro faharoan’ny fifanintsanana ao amin’ny vondrona B. Baolina matin’i Marco Ilaimaharitra tamin’ny “coup franc” teo amin’ny minitra faha-76 no niantoka ny fandresen’ny Malagasy. Voahosotra ho « Homme du match » tamin’ity lalao ity koa i Marco Ilaimaharitra ka nahazo amboara faharoa ho an’ny mpilalao Malagasy. Ambony dia ambony ny fanantenana, ho an’ireo mpilalao sy ny mpankafy baolina kitra ka lasa izao ! Mitombo ny erijika hahalasa lavitra ny Barea amin’ity CAN 2019 ity. Na ireo ekipam-pirenena Afrikanina hafa aza dia manomboka mandray ny Barea ho anisan’ireo atahorana sy mila araha-maso akaiky.
Filaharana vonjimaika ao amin’ny vondrona B :
1°- Nigeria nahazo fandresena in-2, manana isa 6
2°- Madagasikara nanao ady sahala 1, naharesy in-1, manana isa 4
3°-Guinée nahazo ady sahala 1, resy in-1, manana isa 1
4°-Burundi resy in-2 tsy mbola manana isa
Voka-dalao hafa azo omaly ho an’ny vondrona C :
Sénégal - Algérie : (0-1)
Kenya - Tanzanie : (3-2).